Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचको सम्वन्ध सुध्रन सकेन – Emountain TV
काठमाडौं, ३२ साउन । राष्ट्र र नागरिकको हितमा काम गर्नु राजनीति र प्रशासन दुवैको दायित्व हो । तर पनि फरक जिम्मेवारी तथा स्वार्थका कारण राजनीति र प्रशासनलाई अलग–अलग प्रवृत्तिले हेर्ने गरीएको छ ।
राजनीतिज्ञले आफ्नो नीति र सिद्धान्त अनूरुप शासन गर्ने र प्रशासकले राजनीतिज्ञको सिद्धान्त अनुरुप आएका नीति र कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने पद्धती रहेको छ ।
तर नेपालमा एकअर्कासंग अन्तरसम्बन्धीत रहेका राजनीतिज्ञ र प्रशासक अर्थात कर्मचारी बिचको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन । जसले गर्दा बेला बेलामा राजनीतिज्ञहरुले कर्मचारीबाट सहयोग नभएको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
सरकार परीवर्तन संगसंगै कर्मचारी फेरबदल गर्ने राजनीतिज्ञहरुको परीपाटीले नेपाली प्रशासनलाई विगारेको जानकारहरुको भनाई छ । क्षमता र योग्यता नहेरी आफ्नो दलनिकटका कर्मचारीलाई मात्र विश्वासमा लिने राजनीतिक दलको प्रवृतिले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञ बिचको सम्बन्ध बिगारेको पूर्व प्रशासकहरुको बुझाई छ ।
पछिल्लो समय त राजनीतिज्ञ र प्रसाशकहरुको समन्वय नहुँदा सरकारका निर्णयहरु नै विवादित बन्दै आएका छन् । सरकार सम्हालेकादेखि सरकारको प्रतिनिधित्व गरीरहेका दलका शीर्ष नेताहरुबाटै कर्मचारीले असहयोग गरेको, सुचना लुकाएको, दस्तावेज हराएको जस्ता आरोप कर्मचारीतन्त्रमाथि लाग्दै आएको छ । जसले कर्मचारी माथी राजनीतिज्ञको विश्वास नभएको स्ष्पट देखिएको छ ।
जनता र राष्ट्रको हितका कुनै पनि कार्यक्रम लागू गर्ने सन्दर्भमा सरकारको आदेश पालना गर्नु कर्मचारी प्रशासनको दायित्व, जिम्मेवारी र धर्म हो । तर त्यहि धर्म अनुसार काम गरीरहेका कर्मचारीलाई दलगत पृष्ठभुमिबाट हेरेर व्यवहार गरिँदा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रबीच अनमेलको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जबसम्म राजनीतिक दलका भातृसंगठन जस्ता ट्रेड युनीयनहरु खारेज हुँदैनन् तबसम्म राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबिचको सम्बन्ध सुधार नहुने पूर्वसचिव युवराज शर्माको बुझाई छ
सरकारले अगाडी सारेका नीति तथा कार्यक्रम न त कर्मचारीतन्त्र बिना सम्भव छ न त राजनीतिज्ञ बिना नै । त्यसैले एकै सिक्काका दुई पाटो जस्तो सम्बन्ध भएको राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र बिचको सम्बन्ध नसुधारेसम्म विकासका साथै प्रशासनीक गतिविधी प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
सम्बन्ध यस्तै रहे नियन्त्रण गर्न नसकिएको भ्रष्टाचारको कारणमा राजनीतिज्ञले कर्मचारीतन्त्रलाई आरोप लगाउने र कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिज्ञलाई आरोप लगाउने स्थिति रहिरहन्छ ।